Fikradaha ugufiican ee lagu qurxiyo sariirta madaxa | Bezzia
Fikradaha ugufiican ee lagu qurxiyo sariirta madaxa
Pau Heidemeyer | 03/04/2021 16:00 | Guriga
Haddii aad rabto inaad qolkaaga siiso taabasho ka duwan Laakiin ma taqaanid sida loo sameeyo si fudud si ay kuu siiso natiijooyinka ugu fiican, waxaad ku sameyn kartaa adoo wax ka beddelaya madaxa sariirta.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida qolka jiifkaaga looga dhigo mid ka duwan sidii hore kaliya cusbooneysiinta sariirta madaxa.
Qolka jiifka waa mid ka mid ah meelaha guriga ka mid ah oo uusan aqbalin alaab fara badan. Qaybta dhexe waa sariirta, waxaa ku xiga kabadhada, dharka iyo miisaska sariirta. Waxay kuxirantahay nooca qolka jiifka, hadii ay ka dhalinyaro badantahay waxay yeelan doontaa miis, dhanka kale, qolalka jiifka ee waaweyn badanaa malaha waxyaabo badan.
Sababtaas awgeed, waxaan ogaan doonnaa fikradaha ugu wanaagsan ee lagu beddelo sariirta madaxa ee sariirtaada oo aad u siiso taabasho ka duwan. Sidaas darteed, aan baranno fikradaha qaar si loo qurxiyo sariirta madaxa qolkaagana u rogo meesha aad ugu jeceshahay.
Iyada oo ku xidhan cabirka qolkaaga, waxaad ku dari kartaa kursi gacmeed ama laabta khaanadaha si aad u buuxiso meel kasta oo faaruq ah, hase yeeshe, mar walba suurtagal maahan. Tani waa sababta sariirta madaxeedu ay u qaadan karto masraxa dhexe oo ay u siin karto taabasho shaqsiyeed.
1 Ka dhig qolkaaga jiifka meesha ugu wanaagsan
2 Dooro sariirta madaxa ugu habboon
2.2 Nooca madaxa
2.3 Dusha laga saaray
2.4 Iyada oo miisaska sariirta lagu dhejiyo
3 Fikradaha lagu qurxiyo sariirta madaxa
3.1 Muraayadaha madaxa oo leh loox sawir
3.2 Madaxyada shaqada
3.3 Muraayadaha madaxa oo gidaar ku dhegan
3.4 Shelf ama shelf
Ka dhig qolkaaga jiifka meesha ugu wanaagsan
Waa muhiim inaad ku seexato jawi wanaagsan, sababo badan awgood, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya si aad ugu raaxaysato faa'iidooyinka nasashada wanaagsan. Muraayadda madaxa ayaa wax weyn ka tari karta helitaanka qolkaas oo wanaagsan oo baashaal leh
Haddii aan helno qol diiran oo wacan waxaan ku guuleysan doonnaa faa'iidooyin taxane ah: si fakar u fakar, si dhaqso leh uga falceliya, hagaajinta xusuusta iyo foojignaanta. Hurdo xumada kuma koobna oo kaliya howlaha guud ee jirkeena, laakiin waxay sidoo kale carqaladeysaa tayada guud ee nolosha, bulshada, xiriirka iyo xiriirka qoyska.
Si qolkaagu u leeyahay jawiga ugu fiican uguna macaan sida ugu macquulsan, fiiro gaar ah u yeelo tilmaamahan:
Xullo daahyo dhiirrigeliya xasilloonida. Waxaa ka mid ah midabada iftiinka bacaadka ah iyo midabada dhulka. Qoryaha ayaa ina siiya tayo badan oo isbarbardhigaya beige, buluug iyo cagaarka.
Dooro laydh leh midab casaan leh oo u eg qorrax dhaca. Tan waa inaad ku isticmaashaa nalka aan tooska ahayn ee dusha sare ee madaxa.
Isticmaal roogag ka samaysan alaab leh qaabab qurxoon sida xariir ama dhogor.
Feejignow dheeraad ah sariirta. Xaaladdan oo kale, madaxa, inkasta oo ay tahay inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelatid qalooca dhabarkaaga iyo maryaha gogosha waa khafiif iyo cudbi.
Dooro sariirta madaxa ugu habboon
Aad ayey u fududahay in lumo aduunyada madaxa. Noocyadu way badan yihiin badankooduna waa kuwo soo jiidasho leh oo aan dooneyno inaan dhammaantood isku dayno. Laakiin sidaan nidhi, waxaan marwalba arki doonnaa qaabka gurigeenna si uusan isugu dhicin.
Dhinaca kale, laga yaabee inaan siino xiriir dheeri ah qaabka iyo bilicsanaanta marka loo eego shaqeynta madaxa. Labaduba waa muhiim.
Haddii aad rabto in qolkaaga jiifka ahi sifiican u ekaado, oo weliba si fiican looga daboolo buuq, oo midabbo qurxoon derbiga ku leh iyo dhammaan raaxada, maskaxda ku hay dhinacyadan
Waa muhiim in la tixgeliyo waxyaabaha loo isticmaalay qolka jiifka. Waxay kuxirantahay dhadhankaaga iyo miisaaniyada waxay noqon doonaan nooc ama nooc kale. Kuwa alwaaxa leh ayaa ah kuwa nasiiya dareenka ugu badan ee diirimaadka, dhanka kale, waad isticmaali kartaa kuwa birta ah.
Waa boodhadh madax ka mid ah qaab dhismeedka sariirta ama mid aad gooni u iibsato. Madaxa iyo sariirta isku mid ma noqon karaan ama isma dhammaystiraanSi kastaba ha noqotee, waxay abuuri kartaa saameyn muuqaal oo aad u wanaagsan.
Marka ha ka welwelin haddii madaxaagu uusan la mid ahayn sariirta, taasi waxay noqon kartaa taabashada qolkaaga jiifka u baahan yahay.
Dusha laga saaray
Waad dooran kartaa fiilooyinka dabiiciga ah sida cudbiga ama linenka, maxaa yeelay saamayntoodu waa mid aad u cusub. Sida codadka iftiinka si aad ugala jaanqaado noocan ah dharka.
Haddii aad doorato fiilooyinka synthetic, kuwani way fududaan doonaan in la nadiifiyo oo adkaysi badan. Dhinaca kale, kuwa leh muuqaal jilicsan ayaa siin doona muuqaal aad u qurux badan oo raaxo leh. Waxa kale oo aad ku dari kartaa badhamada, sida qaabka badhanka leh ama isbaarada dhinacyada.
Iyada oo miisaska sariirta lagu dhejiyo
Waxaad dooran kartaa madaxa hore u leh nalka miiska sariirta oo lagu daray, tani waxay bixin doontaa naqshad ay weheliso shaqeyn. Maxaa intaa ka badan, waxaad ka ilaalin doontaa laydhku inay qaataan boosaska miisaska sariirta.
Fikradaha lagu qurxiyo sariirta madaxa
Marka xigta, waxaan kuu sheegeynaa fikradaha ugufiican ee lagu qurxiyo sariirta madaxa. Qaabkan waxaad qaab fudud uga heli doontaa qolkaaga jiifka qaab fudud.
Muraayadaha madaxa oo leh loox sawir
Waa fikrad aad u casri ah oo aad loo adeegsado. Sawirro, sawirro ama sawirro ayaa la dhigayaa meeshii uu madaxu tegi lahaa, oo lagu dhajiyay darbiga. Diirada ayaa la saari doonaa sawirada.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad si fiican u doorataa sawirrada si ay dhammaantiis u wada socdaan.
Way ku fiican yihiin hagaajinta meelaha ugu badan. Muraayadaha madaxa ayaa leh shelfyo iyo goobo lagu keydiyo, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon kuwa wax badan ku haysta gurigooda. Marka, marka lagu daro, waxay awoodi doonaan inay haystaan ​​wax kasta oo aan ugu baahanahay gacanta xilligan nasashada.
Muraayadaha madaxa oo gidaar ku dhegan
Xaaladdan oo kale, waxaad awoodi kartaa oo keliya qaybta derbiga ee u dhigma doonta madaxa ama gidaar dhan oo xaddidaya qaybta madaxa oo leh ujeeddo kale. Xaaladdan oo kale, waxaad dooran kartaa warqadda sida ugu habboon ugu habboon qaabkaaga ujeedduna waa in aad beddeli karto inta jeer ee aad rabto inta aad ka taxaddaraysid markaad ka saareyso.
Shelf ama shelf
Waxaad sidoo kale ku beddeli kartaa madaxaaga shelf ama shelf ama dhowr si aad ugu adeegto sidii meel lagu keydiyo. Waad sameyn kartaa shelf lagu dhejiyay darbiga si aad ugu dhejiso looxyada sawirka, Naqshadeynta walxaha ama xusuusta. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dhejin kartaa laambad halkaas markaa uma baahnid inaad ku isticmaashid meel miiskaaga sariirta dhinaceeda ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Fikradaha ugufiican ee lagu qurxiyo sariirta madaxa
Jimicsi faa'iido leh oo loogu talagalay cudurka osteoarthritis